सयपत्री एफएम बागलुङ १३ औ बर्षमा प्रवेश : अस्पतालका बिरामीलाई फलफुल वितरण ! – ebaglung.com
सयपत्री एफएम बागलुङ १३ औ बर्षमा प्रवेश : अस्पतालका बिरामीलाई फलफुल वितरण !
२०७५ चैत्र १६, शनिबार १९:४९	Top News, अन्य समाचार, थप समाचार
ताराप्रसाद शर्मा, बागलुङ २०७५ चैत १६ । बागलुङमा संचालित सयपत्री एफएम ९१ दशमलव ६ मेघाहर्ज बागलुङ १२ बर्ष पुरा गरि १३ औ बर्षमा प्रवेश गरेको छ ।
सयपत्री आवाज बिकसित समाज भन्ने नाराका साथ स्थापति भएको सयपत्री एमएमले १३ औ बर्ष प्रवेशको अवसरमा जनताको सुचना पाउने अधिकारीका लागि निरन्तर लागि रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।
एमएमका अध्यक्ष जगन्नाथ आचार्यले बार्षिकोत्वसको अवसरमा एक बिज्ञप्ती प्रकाशित गरि एमएम संचालनका सहयोग पु¥याउने सवैमा हार्दिक आभार व्यक्त गरेका छन् । आगामि दिनमा पनि सहयोगको अपेक्षा गरिएको बिज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
बिज्ञप्तीमा स्रोता, बिज्ञापनदाता, एजेन्सी, उद्योगी व्यवसायी, एफएम संचालक समिति सम्पूर्ण कर्मचारी, पत्रकार लगाएत शुभेच्छुक शुभचिन्तकहरुमा हार्दिक बद्याई तथा शुभकामना व्यक्त गरिएको छ ।
यसैबिच सयपत्री एफएम बागलुङले १२ औ स्थापना दिवसको अवसरमा धौलागिरि अञ्चल अस्पतालका बिरामीलाई फलफुल बितरण गरेको छ । अस्पतालमा उपचाररत २४ जना बिरामीको शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै फलफुल बितरण गरिएको हो ।
बिरामीलाई नेपाल पत्रकार महासघं बागलुङका अध्यक्ष दिल शिरिष एफएमका सचिव श्रीधर कँडेल, संचालक सदस्य दुर्गादत्त आचार्य, अस्पताल बिकास समितिका अध्यक्ष केवि राना मगर, निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन डाक्टर शैलेन्द्र बि पोखरेल, एफएमका सम्पादक कोपिला कँडेल, धौलागिरी टेलिभिजनका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठ लगाएतले फलफुल बितरण गरेका थिए ।
राजनैतिक भागवण्डा बाटै टुंगियो, बिहुँकोट अमर क्याम्पसको संचालक समिति : कांग्रेसका सुवेदी बने अध्यक्ष !
बागलुङमा सहकारीका सञ्चालकको क्षमता अभिवृद्धि तालिम